လင်မယားလို မနေဖြစ်ကြသူများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ရောက်ကြတဲ့အခါမှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပါ တောင့်တလိုလားသော မရှိမဖြစ်ကိစ္စကတော့ အားလုံးသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း လိင်ဆက်ဆံမှုကိစ္စပဲပေါ့ဗျာ။ လူဆိုတာအသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသော်လည်း ယောက်ျားဆိုလျှင် ယောကျ်ား အလျောက်၊ မိန်းမဆိုလျှင်လည်း မိန်းမအလျောက် တစ်စုံတစ်ခုသော ကာလအထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟူသော အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ခံစားချင်နေကြသေးတာဓမ္မတာပါပဲ။ ဘာသာတရား လိုက်စားသွားလို့ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအမှုကို မပြုတော့ပါ ေ၀ရာမဏိရှောင်ကြဉ်ပါ၏ စွန့်လွှတ်မှု မပြုမချင်း လိင်ဆန္ဒဟာ နှစ်ဦးစလုံးမှာရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချို့သောစုံတွဲများဟာ ဖော်ပြပါအကြောင်းရင်းများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ ဆိုလိုချင်တာက လင်စိတ်သားစိတ်၊ မယားစိတ် ကုန်ခမ်းသွားတာမဟုတ်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအမှုကို မပြုဖြစ်ကြတဲ့အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စိတ်ဖိစီးစရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ညအိပ်ရာထဲရောက်တဲ့အခါ စိတ်ပန်း၊ လူပန်း၊ ညှိုးလျနွမ်းပြီး တစ်လလုံးနေမှ တစ်ကြိမ်တောင် မဆက်ဆံဖြစ်ကြသော အဖြစ်တွေ ရောက်နေကြရပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒေါက်တာစိုးလွင်ရဲ့ စာအုပ်ခေါင်းစဉ်ကိုမှီငြမ်းပြုပြီးပြောရရင် လင်မယားလိုမနေဖြစ်ကြသူများပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ဖြေရှင်းစရာနည်းလမ်းတွေရှိနေတာကို မသိကြသေးသူများအတွက် ဆွေးနွေး တင်ပြပေးလိုပါတယ်။ အချို့ကရှက်ဖွယ်ကိစ္စဆိုပြီး ဆရာ၀န် စတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ရမှာ ကြောက်နေသူများအတွက် မိမိဘာသာဖြေရှင်းကြည့်နိုင်သော အချက်များကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
အိမ်ထောင်သည်များတွင် လိင်ဆက်ဆံမှုသုခမရရှိစေခြင်းအကြောင်းရင်းများထဲတွင် အိမ်ထောင်စု၏ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်နေသောစိတ်ဖိစီးခြင်းသည် ထိပ်ဆုံးကပါ၀င်နေကြောင်း သိရသဗျ။
2001 ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ၀င်ငွေကောင်းချင်လို့၊ ငွေတွေအများကြီး ရှာချင်လို့ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ စိုးရိမ်သောကများခြင်းကြောင့် အလုပ်ချိန်တွေပိုလုပ်တယ်။ ၀င်ငွေပိုကောင်းဖို့အတွက်ကိုရှာရင်း အလုပ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေပြီး လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းဆန္ဒကို နည်းပါးစေခဲ့ကြောင်း စုံတွဲများအား လေ့လာရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။
ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်တစ်ခုအတွင်းမှာ ကလေးတွေအများကြီးမွေးထားခြင်းကလည်း ကလေးတွေကိုကျေွးမွေးပြုစုရန် ငွေပိုပြီးရှာရတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတာကလည်း အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငွေကြေးကိစ္စစိုးရိမ်မှုက အိမ်ထောင်သည်ယောကျ်ားသားများအား လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ် (Men’s Libido) ကို သိသိသာသာ ထူးထူးခြားခြား နည်းစေကြောင်းတွေ့ထားရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်လူရေ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်နဲ့တော့ သိပ်ပြီးစိုးရိမ်သောက ပွားမနေနဲ့တော့၊ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး ထိုက်တန်သလောက်ရလိမ့်မယ်လို့သာ သဘောထားပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးအောင်နေလိုက်ပါ။ စိတ်ပြေလျော့စေသော နည်းလမ်းများအကြောင်း ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီး ကိုယ့်လူရဲ့ဇနီးနဲ့ ချစ်တင်းနှီးနှောရင်းနှီးမှုကို ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ သြော်- တကယ်တော့ငွေဆိုတာ အရာရာအပေါ်မှာတယ်ပြီး လွှမ်းမိုးနိုင်ပါသလား။ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကြောင့်သာ လိင်ကိစ္စကို ထိခိုက်မယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲသားစုံတွဲတွေဘယ်လိုလုပ် ကလေးရနိုင်တော့မလဲ။ သက်လတ်ပိုင်းရောက်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မှုနည်းသောသူတွေမှာ လိင်ကိစ္စမရှိတော့တဲ့ပြဿနာဟာဆိုရင် ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းက ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
2. ဆေးတွေ ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ
အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့လိင်တံ မမာမတောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီအဖြစ်ကို ပန်းသေပန်းညှိုး (Erutile Dysfunction) ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ သဘောက လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်တော့ရှိတယ်။ သားစိတ်၊ မယားစိတ်တော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖွားဖက်တော်က အစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးပြဿနာက ယောကျ်ားက အသက်ရလာသည်နှင့်အမျှ ပို၍အဖြစ်များလာတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုမရှိသော လူနေမှုစရိုက်က အဖြစ်အများဆုံးပဲတဲ့။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အကျင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန် Over ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ စိတ်လာသော်လည်း ဟိုဟာမလာဘူးတဲ့ဗျာ။ ဒါ့အပြင် ဒီအသက်အရွယ်ပိုင်းယောကျ်ားအများစုဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ၀င်လာတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် ကုတ်ပိုးဘက် အဆီအစ်ပြီး သွေးတိုးရောဂါတို့၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာတို့ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ဆရာ၀န်ကသောက်ခိုင်းတဲ့ ဆေးတွေထဲမှာ ဘီတာဘလော့ကာ (Beta-blockers) ဆေးဝါးတွေလည်း ပါတတ်တယ်။ ဒီဆေးတွေကြောင့် ပန်းသေပန်းညှိုးခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်ဖြစ်တဲ့အခါ သောက်ရတဲ့ အင်တီဟစ်စ်တမင်း (Antihistamines) ဆိုတဲ့ဆေးဝါးများ၊ မြန်မာတွေအသိများတဲ့ ဘာမိတွန်လိုပေါ့ဗျာ။ ဒါ့အပြင် စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါပျောက်ဆေးတွေကလည်း ပန်းသေပန်ညှိုးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကြံပေးချင်တာက ကိုယ့်လူမှာ ပန်းသေပန်းညှိုးပြဿနာ ခံစားနေရပြီဆိုလျှင် ယခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆေးတွေထဲက အခြားဆေးတစ်ခုခုကို ပြောင်းပြီးပေးနိုင်ရင် ပြောင်းပေးဖို့ဆရာ၀န်အားပြောင် (ဗြောင်) ဖွင့်ပြောပေါ့ဗျာ။
3. သင့်နှလုံးအတွက် စိတ်ပူမနေနဲ့
အချို့သော လူအများစုအတွက် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်း (Orgasm) ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီလူရဲ့နှလုံးဟာ ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံနေသေးတယ်လို့ဆိုနိုင်သဗျ။ တစ်နည်းပြောရရင် နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းနေမှ Orgasm ထိရောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဗျ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်လူမှာ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ အလွန်တိတိကျကျပြောပြနိုင်သော ေ၀ဒနာခံစားရမှုသာ မရှိဘူးဆိုလျှင် အခြားသော ကိုယ်ကာယအားစိုက်မှုတွေကြောင့် နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကဲ့သို့ ပြဿနာမျိုး မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးဗျာ။ ထပ်ရှင်းဦးမယ်ဗျို့၊ ဆိုလိုချင်တာက လိင်ဆက်ဆံခြင်းလောက် စိုက်ထုတ်ရသော ကာယလှုပ်ရှားမှုထက်ပိုပြီး အခြားသော ကာယလှုပ်ရှားမှုများက နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှု မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဗျ။ တိုက်ရင်လည်း မာလကီးယားသွားနိုင်သဗျ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ကိုယ့်လူ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီး Orgasm ဖြစ်နိုင်သေးရင် ကိုယ့်လူရဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး ကောင်းနေသေးတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်လူရဲ့ဆရာ၀န်က မှာကြားထားတာက မဟုတ်ဘူးဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို မကြောက်မရွံ့နောက် မတွန့်နေနဲ့ဗျာ။ ဆရာ၀န်က မဆက်ဆံနဲ့လို့တိတိကျကျ ညွှန်ကြားလာရင်တော့ ရှောင်ပေါ့ဗျာ။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကိုယ့်လူအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့နဲ့ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိနေဖို့ပဲဗျ။ ဒါမှသာ အင်အားစိုက်ထုတ်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံး လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ အိပ်ရာထဲ၀င်လိုက်၊ ထွက်လိုက်ကိစ္စလည်းပါသပေါ့ဗျာ။ ဒါ့အပြင် အားတက်စရာတစ်ခုက လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာ သက်သေတွေရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်။
4. ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆေးတွေမသောက်နဲ့
အခုခေတ်မျာ ယောကျ်ားအတော်များများ (အိမ်ထောင်သည်မိန်းမတွေလည်းပါတယ်) ဗိုင်ရာဂရာလို ဆေးမျိုးကို လိင်ဆက်ဆံမှုကို အားကောင်းစေတဲ့ဆေးဆိုပြီး လူသိများနေကြတယ်။ ဟိုလူပြော၊ ဒီလူပြောနဲ့ ကောင်းတယ် ဆိုပြီး ညွှန်ကြလွန်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ၀ယ်သောကနေကြတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ပလက်ဖောင်းပေါ်ကဆိုင်တွေ၊ ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာတောင် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူရရှိကြေတာကိုးဗျ။ အဲဒီလိုမျိုး ဗိုင်ရာဂရာအပါအ၀င် ပန်းသေပန်းညှိုး ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ၀ယ်မသောက်ကြပါနဲ့လို့ တားချင်ပါသဗျ။ ဆေးတွေက အတုလား၊ အစစ်လားမသိရတဲ့အပြင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေခံရမယ်၊ ပိုက်ဆံတွေလည်း အလဟဿကုန်ရဦးမယ်ဗျ။ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် တကယ်သောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် ဆရာ၀န်က ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အဖြစ်နည်းအောင်နဲ့ ဘေးကင်းစိတ်ချရမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ ဂဃနဏ ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
5. သင်ဟာ ယောကျ်ားဆိုရင် သင့်ဇနီးကို ပွေ့ဖက်လိုက်ပါဦး
ပညာရှင်တွေ နှစ်ရှည်လများလေ့လာခဲ့မှုအရ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာ အမျိုးသားများအနေနဲ့ အမျိုးသမီးများကို ပွေ့ဖက်ပေးခြင်း၊ နမ်းရှုတ်ပေးခြင်းပြုလုပ်မှုက အရေးပါကြောင်း၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ပိုမိုရရှိကြောင်းတွေ့ထားရသဗျ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Kinsey Institute မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု အရ ယောကျ်ားနဲ့မိန်းမ သဘာ၀အတိုင်း လိင်ဆက်ဆံသော စုံတွဲ (လိင်တူဆက်ဆံသော စုံတွဲမဟုတ်) တွေ ကို လေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာ အဖော်ဖြစ်သူ အမျိုးသမီးအား မကြာခဏပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားများဟာ အဲဒီလိုမလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသားများထက် ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့်3ဆလောက်ပိုပြီး ပျော်ရွှင်မှု ရရှိခဲ့ကြကြောင်း တွေ့ခဲ့ရတာကိုးဗျ။
အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာပုံမှန်နှင့် ဆန္ဒပြည့်၀သော လိင်ဆက်ဆံမှုရှိနေခြင်းက ပို၍အရေးကြီးကြောင်းတွေ့ရှိထားရပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အဖြစ် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်များ မကြာသေးမီက တွေ့ရှိခဲ့သောအလားအလာ ရှိသည့် ဟော်မုန်းအကြောင်း သတင်းပေးပါမယ်။ လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှထွက်ရှိသော အောက်စီတိုစင် (Oxytosin) အမည်ရှိ ဟော်မုန်းသည် လိင်ဆန္ဒနည်းပါးနေသော အမျိုးသားများအား ပန်းသေးပန်းညှိုးမှုကို ကုသပေးနိုင်သည့် အလားအလာရှိသော ဟော်မုန်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းက ယောကျာ်းတွေမှာရော၊ မိန်းမတွေမှာပါ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုနေချိန်မှာ ထွက်ရှိလာသော ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်၀န်သည်များ မီးဖွားနေစဉ်မှာလည်း ထွက်တတ်ပါတယ်။ ကလေးနို့်တိုက်နေသော ကာလမှာလည်းထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းကို အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကြား အချစ်သံယောဇဉ်ခံစားမှုတွေ မြှင့်တင်နိုင်သော အရေးကြီးသည့်ဆေးတစ်မျိုး အဖြစ် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိကြကြောင်း ဖော်ပြရင်း နားကြဦးစို့ရဲ့ဗျာ။